यी हुन मोटोपन घटाउने आठ तरिका - Arghakhanchi Saptahik
यी हुन मोटोपन घटाउने आठ तरिका
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभर ३.९ अर्ब मानिसहरु मोटोपनबाट पिडित छन् । मोटोपन अक्सर नियमित खाना नखानाले
, व्यायाम नगर्नाले बढ्ने गर्दछ ।
मोटोपन घटाउने आठ तरिका -:
१.क्रैश डाइट नखाने
क्रैश डाइटले तपाइको वजन छिटो घटाउन मद्दत
त् गर्दछ तर क्रैश डाइट गरिनजेल मात्र वजन घट्ने हुन्छ । क्रैश डाइटले बिभिन्न खाले साइड इफेक्ट गर्दछ जस्तै टाउको दुख्ने ,सांस को दुर्गंध लगायतको समस्या हुनेगर्दछ । तेसैले क्रैश डाइट लिने बनि सुधार गर्नु पर्दछ ।
२. हरियो साग-सब्जी र फलफूल सेवन गर्ने यदी तपाई आफ्नो वजन नियन्त्रित राख्न चाहनुहुन्छ भने धेरै मात्रामा हरियो साग-सब्जी र फलफूल सेवन गर्नु पर्दछ । फलफूल र हरियो साग-सब्जीमा मिनिरल ,भिटामिन र पानीको मात्रामा धेरै हुने गर्दछ । तर यसमा क्यालरीको मात्रा ज्यादै कम हुनेगर्दा छ । ज्यादा पानी पिउनाले पाचन क्रियामा सहयोग गर्दछ ।
३. ड्राई फूड कम गर्नु पर्छ
नुडल्स ,पिजा ,बर्गर जस्ता रिफाइनड कार्बोहाइड्रेट भएको खाना खानाले शरीरलाई धेरै हानीकारक हुने गर्दछ । कोकाकोला र फ्लेवर भएको जुस पनि निकै हानीकारक हुने गर्दछ । जांड रक्सी सेवन नगरौ तेस्ले शरीरमा प्रोटीन र ग्लूकोजको मात्रा घट्ने र क्यालोरी को मात्रा दुइ गुण बढ्दछ ।
४. नियमित भोजन दिनमा कम से कम तीन पटक भोजन गर्नुपर्छ । बिहानको नास्ता दिउँसो को खाजा भन्दा बढिनै लिनुपर्छ ।खाना खाँदा बिस्तारै खानु पर्दछ किनकी बिस्तारै खाना खादा भोक मेटिए को अनुभव हुन्छ । कहिलेपनि
पेट भरेर खाना खानु हुदैन ।
५. नियमित ब्याम
वजन घटाउनकोलागि नियमित ब्याम गर्नु पर्दछ । नियमित ब्यामले उर्जाको खपत बढाउनुको साथै शरीरमा रहेको बोसो घटाउछ ।
अपर्याप्त निन्द्राले तपाइलाई ज्यादा भोकको आभास दिलाउछ । निन्द्रा पुरा भएन भने हर्मोन सही तरिकाले कम गर्न पाउदैन जसको फलस्वरुपको हामीलाई छिटो -छिटो भोक लाग्दछ । ज्यादा खाना खानाले पाचनको दर घट्दछ ।
७.चिसो पानीले नुहाउने
चिसो पानीले नुहाउनाले शरीरमा रहेको बोसोको मात्रा घटाउन मद्दत गर्दछ । चिसो पानीले खाशगरी तिघ्रा र कम्मरको बोसोलाई सक्रिय गरेर मेटाबॉलिज्म बढाउछ । पानीको तापक्रम २० डिग्री सेल्सियस देखि १५ डिग्री सेल्सियस सम्म बनाई १५ मिनेट नियमित स्नान गर्नाले तपाईको मेटाबॉलिज्म दिनभर राम्रो हुन्छ ।